Madaxweynaha iyo gudoomiyaha baarlamanka oo kulan la qaatay wafdi ka socday baarlamanka dalka Burundi – idalenews.com
Madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud iyo Afhayeenka Baarlamaanka ayaa si kala gooni gooniya u qaabilay Wafdi ka socda Baarlamaanka dalka Burundi.
Wefdigan ka socda Baarlamaanka dalka Burundi oo uu hoggaaminayo guddoomiyaha guddiga Difaaca Baarlamaanka Burundi Mr Hakizimana Emalien oo maalintii labaad ku sugan magaalada Muqdisho ayaa maanta si gooni gooni ah kulammo ula qaatay madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud iyo Guddoomiyaha Barlamaanka Federaalka Soomaaliya mudane Maxamed Sheekh Cismaan Jawaari.
kulanka hore ayaa ka dhacay xafiiska guddoomiyaha Baarlamaanka Soomaaliya, waxaana looga arrinsanayey xiriirka labada Baarlamaan, Iskaashiga dowladda Burundi ay la leedahay Soomaaliya isbaddelkii ka dhacay.
Kulanka oo ay warbaahinta xaadir ku aheyd waxaa faah faahin ka siiyey oo wefdigana mar kale ku soo dhaweeyey caasimadda guddoomiyaha Baarlamaanka Federaalka Jamhuuriyadda Soomaaliya Maxamed Sheekh Cismaan “Jawaari” isaga oo tilmaamay in uu ku faraxsan yahay booqashada wefdigan oo ay wada shaqeyn joogta ah yeeshaan.
Maxamed Sheekh Cismaan Jawaari Guddoomiyaha Baarlamaanka ayaa sheegay in ay soo dhaweeynayaan in wefdigan uu u kuurgalo ciidammada Burundi ee ka tirsan AMISOM, maadaama uu horkacayo guddoomiyaha guddiga Difaac, isagoo dhinaca kale igu Tacsiyeeyay dhibaatadii Dhaqaale ee ka dhacay dalka Burundi Bishii aynu soo dhaafnay.
Guddoomiyaha guddiga Difaaca Hakizimaha Emalein ayaa ka mahadceliyey soo dhaweynta ballaaran ee ay dowladda Soomaaliya kala kulmeen, isla markaana booqashadooda Muqdsiho ay wax badan ku soo kordhin doonto wada shaqeynta labada dal.
Dhinaca kale wefdiga ayaa isla maanta kulan gaar ah la qaatay madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya mudane Xasan Sheekh Maxamuud, kaasi oo isna looga hadlay xiriirka dowladaha Soomaaliya iyo Burundi sidii loo sii adkeyn lahaa iyo kaalinta ay ka qaadan karaan dhismaha ciidammada qaranka Soomaaliyeed.
Wefdigan ayaa sii wadi doono maalmaha ay ku sugan yihiin magaalada Muqdisho u kuurgalidda ciidammada Burundi ee howlgalka AMISOM ka qeyb qaadanaya, si ay u ballaariyaan taageeradooda.